Mpanamboatra sy mpamatsy trano fitoeran-javatra azo atsangana - Shina fananganana trano fitoeran-javatra azo atsangana
Kitapo trano azo anaovana Container Kit Prefab an-trano lafo vidy amin'ny fiainana
1. Trano fitoeran-kazo mivelatra azo alefa matetika ny trano fitoeran-javatra azo alefa, ny zava-dehibe kokoa, ny toerana malalaka hipetrahana amin'ny finday. Vita izany aorian'ny nanitarana azy, ny habe dia manodidina ny 37 amin'ny trano modular malaza misy antsika, metatra toradroa, manodidina ny 2.5 ka vita amin'ny vy vy vita amin'ny vy mihidy amin'ilay nikatona. Miaraka amina varavarankely sy voaravaka sandwich voaravaka ary varavarana natao ary takelaka. Manolotra vahaolana isan-karazany izahay: ampy fitaovana tsara, tor izany be mpampiasa ho an'ny mpanjifa. Mety foana ny ao anatiny, trano fialantsasatra, ...
Trano modular any China Prefab trano porta cabai casa, aostralia 20ft sy 40 ft azo alefa trano fitoeran-kazo azo amidy
1.Expandable Container house 1) Izy io dia azo ampiasaina ho efitrano fandraisam-bahiny, hopitaly vonjimaika, trano fidiovana, birao, efitrano fitehirizana sns. 2) Azo apetraka ao anatin'ny fotoana fohy izy io, ampiarahan'ny bolt miaraka amin'ny hamafiny. 3) Azo ampiasaina miverimberina miaraka amin'ny androm-piainany mihoatra ny 15 taona izy io. 4) Miaraka amina rafitra voaisy tombo-kase sy azo antoka, porofon-drano, mahazaka afo, porofon'ny hamandoana ary manohitra ny loto. 5) Miaraka amin'ny tohanana fanohanana toy ny koveta, koveta, fifehezana rivotra, socket, sns. Safidy maro loko ...
Trano prefab madinidinika kely azo alefa 20ft vaovao azo alefa ao amin'ny trano fidiovana (Bathroom, lakozia) trano fivarotana
1.Expandable Container house Item 20ft / 40 ft trano azo atsangana, trano manorina haingana Steel Frame 2.5-3.0 mm tsanganana vy sy tara-pahazavanaColor matetika fotsy, loko RAL hafa no misy. Wall / Roof panel 50/75 mm EPS / rock wool / PU sandwich panel Floor Mgo board + PVC gorodona miaraka amin'ny loko hafa hisafidianana Window Window Double glazed PVC window, efijery manidina MAIMAIM-POANA dia varavarana firaka magnesioma Titanium varavarana / varavarana hazo / varavarana misosa PVC Fandroana fandroana, seza T ...